​जिन्दगी यसरी नै चल्दो रहेछ– श्वेता खड्का, नायिका
Monday, 10 Jul, 2017 5:04 PM
चलचित्र कोहिनुरबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी नायिका श्वेता खड्का श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि लामो समय पीडाका कारण घरमै बसिन् । पछिल्लो समय आफ्नो हिम्मत बटुलेर जीवनलाई अघि बढाउने प्रयासमा छिन् उनी । परिवार र आफन्तको सहयोगमा उनी फेरि चलचित्रमा फर्किएकी छिन् । चलचित्र कान्छीमा उनले लगानी गर्नुका साथै अभिनयसमेत गरेकी छिन् । उनै श्वेतासँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी :
पुनः फिल्मी क्षेत्रमा फर्कदा कस्तो लागिरहेको छ ?
रमाइलो लागिरहेको छ । लामो समयपछि फिल्मी क्षेत्रमा आएको छु । सबै साथीभाइ, मिडिया र परिवारको ठूलो सहयोग पनि पाएको छु । जसले गर्दा उत्साहित छु ।
जीवनमा एउटा ठूलो पीडालाई पार गर्दै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ, कत्तिको गाह्रो भइरहेको छ ?
जीवनको सबैभन्दा अनमोल चिज गुम्दा ठुलै चोट लाग्यो । तर पनि सबैको सहयोगले एउटा चोटबाट उत्रिएर काम गर्न लागेको छु । जीवन भन्ने चिज नै यस्तै रहेछ । कहिले मिलन त कहिले बिछोड, कहिले हाँसो, कहिले रोदन । यसरी नै जिन्दगी चल्दोरहेछ । पीडा र रोदनलाई पन्छाएर अघि बढ्दै छु । काम गर्दै छु । हेरौ के हुन्छ अबको दिनहरुमा ।
तपाईले खेल्न लागेको कान्छी कस्तो खालको चलचित्र हो ?
रोमान्टिक चलचित्र हो । इन्टरटेनमेन्टको प्याकेज छ यस चलचित्रमा ।
कान्छी चलचित्र तपार्इं आफैँले नै लगानी गर्नुभएको होइन ?
हो, यस चलचित्रमा पूरा लगानी नै मैलै गरेको हो ।
२० वर्ष अगाडि पनि कान्छी नामक चलचित्र बनेको थियो । पुनः त्यही नाममा नै चलचित्र किन बनाउनु भयो ?
सन्दर्भ मिलेर नै हो । कथावस्तु कान्छी नामक पात्रको नै सेरोफेरोमा घुमेर हो । यो नयाँ धारमा बनेको छ । यसमा कुनै शंका नै मान्नु पर्दैन ।
पुरानो कान्छीजस्तै नयाँ कान्छीलाई दशर्कले रुचाउँलान त ?
धैरै नै रुचाउँछन जस्तो लाग्छ । कान्छी एउटा यस्तो चलचित्र बनेको छ, जो कोहीलाई पनि मन पर्ने छ ।
किन आफैँ निमार्ता आफैँ नायिका बन्नुभएको ?
चलचित्रको विषयवस्तु नै मैमाथि नै सुहाएर हो । अन्यथा केही पनि छैन ।
चलचित्र कोहिनुर जति नै सफलता कान्छीले पाउँछ जस्तो लाग्छ तपार्इंलाई ?
कोहिनुर र कान्छी अलग–अलग कथा वस्तुमा बनेका चलचित्र हुन् । कोहिनुरले अधिकांश दशर्कले रुचाउनु भयो । कान्छी चलचित्रको बिषयवस्तु फरक छ र उत्कृष्ट चलचित्र बनेको छ । यसले गर्दा कान्छी चलचित्रलाई पनि दशर्कले रुचाउनु हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
तपाईंलाई धेरै फिल्म खेल्ने अफर आएको थियो, तर किन खेल्नुभएन नि ?
कामको अफरहरु त थिए, तर मेरा आफ्नै समस्याहरु थिए । के कारणहरुले काम गर्न नसकको भन्ने कारण तपाईंहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । अब काम गर्छु भनेर निस्किएको छु । हेरौं समयले साथ दियो भने राम्रो काम गर्दै जान्छु । घरकै प्रस्तावमा मैले नयाँ फिल्म बनाएको हुँ ।
पुनः आकाश शाहलाई नै निर्देशकमा लिनुभयो नि, किन ?
उहासँग हामीले कोहिनुर चलचित्रमा काम ग¥यौं । दोस्रो चलचित्रमा पनि सँगै काम गरौं भनेर हो । उहाँ एकजना अनुभवी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ ।
कोहिनुरमा श्रीकृष्णजी पनि हुनुहुन्थ्यो, नयाँ फिल्ममा काम गर्ने क्रममा उहाँको कत्तिको सम्झना आयो ?
उहाँले नै मलाई फिल्मी क्षेत्रमा काम सिकाउनु भएको हो । त्यसकारण हरेक समय उहाँलाई सम्झिरहेको हुन्छु ।
अबका दिनमा चलचित्रमा नै निरन्तर लाग्ने सोच छ, वा अरु कुनै योजना छन् ?
कुनै न कुनै कामबाट चलचित्रमा निरन्तर दिइनैरहन्छु । अब चलचित्र क्षेत्रबाट म टाढा बस्न सक्दिनँ । यतिखेर कान्छी चलचित्रको काम भइरहेको छ चलचित्रको काम पूरा भएपछि नेपाल बाहिर पनि यसलाई लाने तयारी गर्छु ।
​प्रेममा धोका पाएँ– पुजा शर्मा, अभिनेत्री
​संगीत भनेको खुला आकाश हो–मेलिना राई, गायिका
​अब हराउँदिन- एञ्जिला, गायिका
​अब चाँडै काठमाडौं आउँछु– कविता सिवाकोटी, गायिका
​बिहेको कुरो ठट्टामै उडाउँछु– बबिता फोम्बो, अभिनेत्री तथा मोडल